Kusukela esikhathini eside esidlule, zonke izizwe zomhlaba, nganoma yimuphi iphuzu babengesibo emhlabeni, ukuzama nganoma iyiphi indlela ukuze balukhulume izilwandle nasolwandle. Okokuqala lokhu isithakazelo yayisekelwe eqinisweni ukuthi amanzi olwandle emhlabeni kuyindlela ukuhweba khulula, ukuhamba futhi izinto ezintsha ngokuqinisekile eziyoholela udumo nengcebo. Iminyaka yadlula, futhi isimo kwakhiwa nemizana ezingxenyeni ezihlukahlukene zomhlaba. Phakathi kwamazwe izungezwe izimpi eside owabunjwa, ngokungafani kubo, labo ukufinyelela emanzini evulekile. Yiqiniso, izimo ezinjengalezi ngokuphindiwe ibe imbangela izingxabano ezinkulu, futhi ngokuvamile yaphela ezimpini. Okunjalo skirmishes emhlabeni-ngezinga namanje.
Kukhona amazwekazi amabili emhlabeni, okuyinto zitholakala phakathi nezwe yezwe ngobunengi. Okokuqala, lokhu Afrika - nezwekazi has 16 zalezi uthi. Kuyaphawuleka ukuthi, uma kubhekwa isimo sezulu sendawo kanye nokuntuleka kule kungekho amanzi yokuphila kwabantu ezindaweni ezinjalo liyinkimbinkimbi kakhulu futhi yinkinga. Eyesibili izwekazi lapho kukhona 14 amazwe angekho izungezwe, kuyinto Europe. Kungaba uzobhekwa nokulingana kakhulu e-Afrika kulokhu, ubujamo bezulu kuba ukhululekile kakhulu futhi efanelekayo ukuphila, kanye nomnotho kanye nobudlelwane zezombusazwe lalihamba kahle kakhulu. Nakuba engakwazanga ukuwaphendula sea emikhawulweni, kula mazwe kwamazwe ase-Europe achumayo kwezenhlalo nezomnotho.
Afrika iyizwekazi eligcwele kangaka izinkathazo, okuyinto ezindaweni eziningi lags ngemuva zonke ezinye ezindaweni ezinabantu zomhlaba. Yingakho naphakathi amazwe ase-Afrika uhlangabezana ukungakhululeki kakhulu futhi nobunzima. Ngokwe-UN Convention on Law yoLwandle , wonke amazwe emhlabeni ungaba yokungena olwandle. Kubalulekile kuphela ukuthola abalingani nesithakazelo, okuyinto kuyoba okunenzuzo ukuba ulungise izindlela zabo - imigwaqo kanye nojantshi - yezokuthutha. Ngenxa yokuthi impilo nezomnotho yaso iningi amazwe e-Afrika liphansi, amazwe alo izungezwe kuyenzeka zingayitholi leli lungelo.
Uma sicabangela izwe kwamazwe ase-Europe, kungenzeka ukuba baqonde ukuthi ukuthuthukiswa komnotho akuxhomekile geography. Liechtenstein, Austria, eSwitzerland, Andorra, Hungary - kuyinto uhlu olufushane amazwe obe yimpumelelo futhi bechuma, okuyinto abanawo amanzi evulekile. Phakathi omakhelwane bethu abaseduze kukhona uthi non-zasolwandle - Belarus, okuyinto by ukuthuthukiswa salo ezingeni ehlonipheke kakhulu.
amazwe izungezwe nomakhelwane babo abafinyelela kolwandle - konke lokhu kuwumphumela izinqubo zomlando. endaweni efanele emhlabeni okwamanje akunakwenzeka, kodwa-ke, sibonga yentuthuko kwezobuchwepheshe nokuphila kwalezi amazwe iye yathuthuka kakhulu futhi akuhlukile impilo ezindaweni ulwandle.
Regional Art Museum (saseTomsk): incazelo nemibukiso